Shaxda Adag Ee Andrea Pirlo Uu Qorshaynayo In Juventus Ku Ciyaarto & Kooxaha Ay Kala Joogaan Laacibiinta Uu Ku Xisaabtamayo - Gool24.Net
Shaxda Adag Ee Andrea Pirlo Uu Qorshaynayo In Juventus Ku Ciyaarto & Kooxaha Ay Kala Joogaan Laacibiinta Uu Ku Xisaabtamayo
Tababaraha cusub ee Juventus ee Andrea Pirlo waxa uu qorshaynayaa inuu isbeddel weyn ku sameeyo naadiga, isla markaana uu suuqa iibka ciyaartoyda ee xagaagan uga adeegto si wanaagsan, si uu kooxda u keeno ciyaartoyda ay u baahan tahay ee gaadhsiin karaya heerka ay ka doonayso inay fagaareyaasha Yurub ka joogto, gaar ahaan inay ku guuleysato Champions League.
Andrea Pirlo oo ay da’diisu tahay 41 jir ayaa toddobaadkii ugu horreeyey ee loogu dhaqaaqay inuu yahay tababaraha cusub ee beddelay Maurizio Sarri waxa uu ku hawlan yahay sidii uu kooxda uga nadiifin lahaa ciyaartoyda waqtigoodii wanaagsanaa ka gudbay, kuwaas oo tiradooda lagu sheegay toddoba.
Marka uu ka takhaluso toddobada ciyaartoy oo warbaahinta Talyaanigu ay ku tilmaantay ‘kuwo dhintay’, waxa uu lasoo saxeexan doonaa ciyaartooyo wax ka tara afka hore iyo khadka dhexe oo ah meelaha uu muddadii uu kooxda u ciyaarayay iyo intii ka dambaysay ee uu ku dhex-jirayba ay u muuqatay in haddii wax laga beddelo ay kooxdu gaadhi karayso hammigeeda ah Champions League oo ay ku guuleysato.
Pirlo waxa uu lama taabtaan u arkaa Cristiano Ronaldo oo markanna hoggaamiyey kasii ahaan doona naadiga. Laacibka reer Portugal ayaa laba sannadood ka hor ay Juventus ula soo saxeexaty si uu uga caawiyo inay ku guuleystaan Champions League, laakiin waxay labada jeerba ku hadheen meel niyad-jab leh oo aanay filayn.
Paulo Dybala oo Real Madrid lala xidhiidhinayo ayaa uu Pirlo kusii hayn doonaa Turin, waxaanu la wadaagi doonaa Ronaldo afka hore, laakiin waxa uu damaca tababaraha cusub yahay inuu kusoo kordhiyo weeraryahan dhexdooda taagnaada oo qaata kaalinta Gonzalo Higuain, isla markaana fudaydka iyo da’daba gaadhsiisan heerkii uu ugu ciyaari Juventus.
Weeraryahanka Wolves ee Raul Jimenez oo 17 gool oo Premier League ah dhaliyey xili ciyaareedkii dhowaanta dhamaaday ayaa uu Pirlo bartilmaameedsanayaa, waxaa se helitaankiisa kaga xidhan lacag badan oo ay kooxda uu ka tirsan yahay ku xidhayso naadiyada doonaya, waana £90 milyan oo Gini.
Waxa kale oo Juventus ay diiraddu u saaran tahay Federico Chiesa oo Fiorentina afka hore uga ciyaara iyo Nicolo Zaniolo oo Roma u ciyaara. Sidoo kale, Duvan Zapata oo Atalanta ka tirsan iyo Arkadiusz Mili oo Napoli ah ayaa uu iyagana Pirlo eeganayaa haddii uu ka helo fursado uu kula soo saxeexan karo.
Juventus waxay mar horeba ku guuleysatay inay samayso saxeexeedii ugu horreeyey oo ah Arthur Melo oo ay £66 milyan oo Gini kagala soo wareegtay Barcelona isaga oo qayb ka ahaa heshiis ciyaartoy-isdhaafsi ah oo ay kooxda reer Spain ku qaadatay Pjanic oo isaguna £54 milyan oo Gini ku tegay dhinaca kale.
Qorshaha Pirlo ayaa ah in Arthur uu kusoo lammaanaysiiyo Isco oo ku caajisay kaydka Real Madrid.
Haddii Isco uu ku guul-darraysto, waxa uu Pirlo u jeedsan doonaa Manuel Locatelli oo AC Milan khadka dhexe uga ciyaara iyo kubbad-sameeyaha Brescia ee Sandro Tonali.
Pirlo waxa ka go’an inuu kooxda ka fasaxo Alex Sandro iyo Mattia De Sciglio, waxaana boosaskooda uu u doonayaa inay buuxiyaan Emerson Palmieri oo Chelsea u ciyaara iyo Luca Pellegrini oo Cagliari difaaca bidix uga ciyaara.
Halkan kaga bogo shaxda suurtogalka ah ee Juventus ay ku ciyaari doonto fasal ciyaareedka dambe
Mahat jey says:
This line is good but still we are kicking a goalkeeper